Hiran State - News: HS:- Xildhibaanada Hiiraan ee ku sugan magaalada Belet Weyne oo shir jaraa'id oo ay qabteen kaka hadlay...
HS:- Xildhibaanada Hiiraan ee ku sugan magaalada Belet Weyne oo shir jaraa'id oo ay qabteen kaka hadlay...
HS:- Magaalada Belet Weyne oo la ciir ciireysa tiradii ugu badneyd ee iskugu jira siyaasiyiin hore iyo kuwii danbe, qurbajoog, waxgarad iyo dhalinyaro rag iyo dumarba leh kuwaasi oo halkaasi u tagay ka qeybgalka shirweynaha nabada iyo aayokatalinta Hiiraan.
Hadaba iyadoo ay maalmahan magaalada gaarayeen waftiyo kala duwan ayaa hadane waxaa maanta booqasho ku tagay Isbitaalka weyne ee magaalada Belet weyneXildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya oo Maalmahaan Boqosha ku jogay Magaalada iyo Mas’uuliyiinta Maamulka Hiiraan min heer gobol ilaa degmo.
Mas’uuliyiinta ayaa Kormeray dhamaan qeybaha uu ka kooban yahay Isbitaalka guud ee Magaalada B/weyne sida bukaanka ku jira Isbitaalka,Saalada khaliinka,keydka daawada inta isbitaalka u taalo iyo qeybaha kale ee uu ka koban yahay maadaama uu isbitaalku yahay mid aad u weyn. waxana ku jira xiligan Bukaano kala duwan oo adegya caafimaad usoo dontay Isbitaalka.
Intaasi kadib Xildhibaanada iyo mas’uuliyiinta maamulka Gobolka ayaa kulan la qaatay Maamulka isbitaalka waxana xaalada isbitaalka kaga warbixiyay Agaasimaha Guud ee isbitaalka Dr Axmed Maxamed Khalif isagoo sheegay in isbitaalku uu soo maray Marxalada kala duwan haatana uu qarka u saran yahay inuu xirmo.
Intaasi kedib waxaa hadalka qaatay Wasiirkii Hore ee Arimaha Gudaha iyo fadaraalka ahna xildhibaan katirsan Baarlamaanka soomaaliya C/laahi Goodax waxuuna sheegay in wasaarada Caafimaadka ay kala hadlayaan dhibaatada ka jirta isbitaalka si loo soo gaarsiiyo wax yaabaha uu u baahan yahay Isbitaalka.
Sidoo kale waxaa halkaas kaas isaguna qudbad kooban ka jeediyey masuuliyiinta maamulka Hiiraan oo uu horkacayey Sheikh Xusen Cismaan Cali sheegayna inuu kaga mahad celinayo Xildhibaanada booqashada ay ku tageen Isbitaalka Guud ee magaalada B/weyne oo ah isbitaalka ugu weyn Gobolada Dhexe Waxana uu ku booriyay xukuumada soomaaliya iney wax ka qabato xaalada isbitaalka.
Booqoshada Xildhibaada ka tirsan Baarlamaanka saomaaliya iyo Mas’uuliyinta Maamulka Gobolka hiiraan kan degmada B/weyne ay ku tagen isbitaalka b/weyne ayaa ku soo aaday xili isbitaalka ay ku jiraan bukaan aad u farabadan oo ka kala yimid degaanada gobolka hiiraan iyo Gobolada Dariska la ah Gobolka Mana jirto Hay’ad gacanta ku hayso isbitaalka oo wax ka badashay dhibaatada ka jirta Isbitaalka B/weyne.
Markii ay soo dhamaatay booqashada ayaa waxaa shir Jaraa'id oo ay caawa qabteen mudanayashu ku sheegeen xili ay ka hadlayeen shirweynaha Aayakalinta Hiiraan oo aad u soo jitay qaabka wanaagsan oo uu ku socdo iyaoona bogaadiyey habka degan ee uu shirku u socto xili dhawaan la filayo iney magaalada soo gaaraan waftiyo kala duwan kuwaasi oo iskugu jira dowlada federalka iyo qurbajoog intaba .
· admin on May 12 2015 22:23:29 · 0 Comments · 3344 Reads ·
14,913,862 unique visits